တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ယနေ့ညပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရွှေနန်းတော် ဟိုတယ်၌ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အတူဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နှင့်အတူဇနီး Lt. Col. Mrs. Khamsone Chanyalath ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအို နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ၊ လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ တက် ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး တို့အား ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ အသီးသီးပြောကြား၍ တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် အတူ ဂုဏ်ပြုညစာကို အတူတကွသုံးဆောင်ကြသည်။
ညစာသုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကွပ်ကဲမှု အောက် မြ၀တီတေးဂီတအဖွဲ့က တေးသီချင်းများ၊ အကပဒေသာများဖြင့် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေကြပြီး ညစာ သုံးဆောင်အပြီးတွင် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့နောက် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေကြသော ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့မှ စစ်သည်၊ စစ်သမီးများအား ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းများ အသီးသီးပေးအပ်ကြပြီး အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ သူရဲကောင်းဗိမာန်သို့ သွားရောက်၍ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြု ပန်းခြင်းချကာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်း အသက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည့် သူရဲကောင်းများကို အလေးပြုပြီး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ – ၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ယနညေ့ပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ရှနေနျးတျော ဟိုတယျ၌ ဂုဏျပွုညစာဖွငျ့တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုညစာစားပှဲအခမျးအနားသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အတူဇနီးဒျေါကွူကွူလှ၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး ခငျအောငျမွငျ့နှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး လာအိုအမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီး နှငျ့အတူဇနီး Lt. Col. Mrs. Khamsone Chanyalath ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအို နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ၊ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီးတို့က လာအိုအမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ဇနီး တို့အား ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။ ယငျးနောကျ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုအမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ နှုတျခှနျးဆကျစကားမြား အသီးသီးပွောကွား၍ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့ အတူ ဂုဏျပွုညစာကို အတူတကှသုံးဆောငျကွသညျ။
ညစာသုံးဆောငျနစေဉျအတှငျး ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးနှငျ့စိတျဓာတျစဈဆငျရေး ညှနျကွားရေးမှူးရုံး ကှပျကဲမှု အောကျ မွဝတီတေးဂီတအဖှဲ့က တေးသီခငျြးမြား၊ အကပဒသောမြားဖွငျ့ သီဆိုကပွဖြျောဖွကွေပွီး ညစာ သုံးဆောငျအပွီးတှငျ အမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျကွသညျ။ ထို့နောကျ သီဆိုကပွဖြျောဖွကွေသော ဖြျောဖွရေေးအဖှဲ့မှ စဈသညျ၊ စဈသမီးမြားအား ဂုဏျပွုပနျးခွငျးမြား အသီးသီးပေးအပျကွပွီး အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး ဦးဆောငျသော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ သူရဲကောငျးဗိမာနျသို့ သှားရောကျ၍ အထိမျးအမှတျကြောကျတိုငျရှေ့၌ ဂုဏျပွု ပနျးခွငျးခကြာ နိုငျငံတျောကာကှယျရေး တာဝနျမြားကို ကပြှေနျစှာထမျးဆောငျရငျး အသကျစှနျ့လှတျခဲ့ရသညျ့ သူရဲကောငျးမြားကို အလေးပွုပွီး ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Kazuyuki NAKANE အားလက်ခံတွေ့ဆုံ